musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Turkey inosimbisa COVID zvinorambidzwa kune vanosvika vekunze
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Izvo zvidzoreredzo zvinoitwa nechinangwa chekudzivirira kupararira kweCVID-19 denda muTurkey, uye zvakagadzirirwa kutanga kushanda Mugovera, Nyamavhuvhu 4.
Turkey inogadziridza anti-COVID zvinorambidzwa kune vanosvika kune dzimwe nyika.
Mirawo inovavarira kudzora kupararira kwe COVID-19 denda muTurkey.
Yakagadziridzwa mitemo yakagadzirirwa kushanda mangwana.
Ministry yeInterior yeTurkey yaburitsa denderedzwa nhasi, ichizivisa zvitsva zvitsva zvezvinodiwa uye zvirambidzo zvevashanyi vanosvika munyika kubva kunze kwenyika.
Rondedzero yakatsvuka: Brazil, South Africa, Nepal, uye Sri Lanka
Kumiswa kwendege dzakananga kubva Brazil, South Africa, Nepal, uye Sri Lanka ichaenderera kusvikira kumwe kuziviswa.
Vapfuuri vakamboenda kunyika idzi mumazuva gumi nemana apfuura vachakumbirwa kuti vaendese yakaipa PCR bvunzo yavakawana anokwana maawa makumi manomwe nemaviri vasati vapinda Teki.
Vachavharirwawo kwavo kwemazuva gumi nemana munzvimbo dzakatemerwa magavhuna, panopera muyedzo wakashata uchazodiwa imwezve nguva. Kana paine yakanaka bvunzo mhedzisiro, murwere anochengetwa ari ega, zvinozopera nemhedzisiro yakaipa mumazuva gumi nemana anotevera.
Bangladesh, India nePakistan
Mitemo yekufambisa yeBangladesh, India, nePakistan yakarerutswa, uye vafambi vanobva munyika idzi, kana avo vakamboenda kunyika idzi mumazuva gumi nemana apfuura, vachakumbirwa kuendesa yakaipa PCR bvunzo yakawanikwa kusvika maawa makumi manomwe nemaviri zvisati zvaitika.
Vanhu vanonyora vanogamuchira madosi maviri eECVID-19 majekiseni akapihwa mvumo neWorld Health Organisation kana Turkey kana imwe dose yejekiseni raJohnson & Johnson mazuva gumi nemana vasati vapinda muTurkey vanozoregererwa kubva kune vega.
UK, Iran, Egypt neSingapore
Vapfuuri vanouya kubva kuUK, Iran, Egypt, kana Singapore vachazodikanwa kuti vaendese mhedzisiro yakaipa kubva kuPCR bvunzo dzakaita anokwana maawa makumi manomwe nemaviri vasati vapinda.
Kune vafambi vanofamba kubva kuAfghanistan, avo vanogona kupa gwaro rinoratidza kuti vakapiwa jekiseni reCOVID-19 mumazuva gumi nemana apfuura kana kupora kubva kuhutachiona hweCOVID-14 mumwedzi mitanhatu yapfuura havangadi mhedzisiro yekuyedzwa kana kuiswa voga.